Alien Code (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး – Gold Channel Movies
Video Sources 3780 Views
Alien Code (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
The end of mankind. Apr 23, 2017 United States 97 Min. Not Rated
Alien Time!! Let’s decipher!!
ဝုန်းဝုန်း ဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ Hollywood ဇာတ်ကားတွေ ကြည့်နေရတာများလို့ စိတ်ပျက်နေပြီလား ဒီလိုဆို si-fi ဇာတ်ကားကောင်းလေး alien code နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
ဇာတ်ကားအဖွင့်မှာတင် မင်းသားဖြစ်သူဟာ ဧည့်ခန်းထဲမှာလဲနေတဲ့ သူ့အလောင်းကိုသူပြန်မြင်နေရတယ်
Watch Me လို့ရေးထားတဲ့
စာရွက်ခေါက်လေးပတ်ထားတဲ့ USB တစ်ခုက သူ့အလောင်းရဲ့လက်ထဲမှာ …
အဲလက်စ် ဂျေကော့ဟာ ဟက်ကာ ဝှက်စာဖော်တဲ့သူ အစိုးရကိုသိပ်ပြီး မကြည်တဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုးလူလတ်ပိုင်းတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့သူဆီကို အစိုးရ လျို့ ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေ အလုပ်တစ်ခု ကြေးစားအဖြစ်နဲ့ ဝှက်စာဖော်ပေးဖို့ ဌားရန်လာခဲ့ပါတယ်
အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဂျေကော့ တစ်ယောက် သူနောက်ကို အဖွဲ့အစည်းက လူတွေနောက်ယောင်ခံလိုက်တာတွေ မမြင်ဖူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကောင်တွေ မြင်လာခဲ့ရပါတယ် လူကလည်း တစ်နေ့တစ်ခြား ကျန်းမာရေးချို့တဲ့လာခဲ့တယ် အဲလက်စ်တစ်ယောက် ဘာဖြစ်သွားတာပါလိမ့် ??
thriller လိုလို mysery လိုလိုနဲ့
တရိပ်ရိပ် ဘာမှမသိတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားတယ် ဇာတ်လမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်း စဉ်းစားပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်
Time travel တွေ quantum theory တွေရဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ ဗဟုသုတရစရာတွေအပြည့်ပါဘဲ
တခြားဇာတ်ကားတွေလို tempoလည်း ပြီး ဇာတ်လမ်းလည်းပြီး စတဲ့
Tempo ပြီးမှ ပေးချင်တဲ့ message တွေကို တသီကြီးကို အေးအေးဆေးဆေးနဲ့မထင်မှတ်တဲ့ အချိုးနဲ့ တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ချပြသွားတာပါ ပေးချင်တဲ့ message ကိုလည်း တစ်ရစ်ပြီးတစ်ရစ် ဖြည်ချသွားတဲ့အခါ ကြည့်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း
ဝှက်စာဖော်နေရသလို actor နဲ့အတူ လိုက်စဉ်းစားနေမိရော
မိုးအေးအေးလေးမှာ ဇာတ်ကားလေးကြည့်ရင်း ခဏတာ ဘဝဒဿ နလေးတွေကို ဝှက်စာဖော်ကြည့်ကြမယ်!!
Translated & Reviewed by ixora
Size 720/210 MB
Original title Alien Code
IMDb Rating 5.5 340 votes
Download Openload (HD) မြန်မာ 720 MB2weeks admin
Download Openload (SD) မြန်မာ 210 MB2weeks admin
Download Google drive(HD) မြန်မာ 720 MB2weeks admin
Download Google drive(SD) မြန်မာ 210 MB2weeks admin
Still/Born (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Zoe (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး